Sunrise Chemical Industrial Co., Ltd (Shanghai Yusheng Sealing Material Co., Ltd) bụ ụlọ ọrụ ISO9001-2015 dị elu na-arụ ọrụ na nyocha na ịzụlite ngwa nke nrapado na teknụzụ mkpuchi. Anyị abụghị naanị ndị ọrụ ụzọ na-emepụta adhesives, kama anyị bụkwa otu n'ime ndị na-emepụta ụfụfụ PU kachasị ukwuu na China. Ọhụụ ụlọ ọrụ bụ iwulite akara ụwa na ịghọ ntọala mmepụta ihe na ụwa.
Sunrise Chemical Industrial nwere ntọala abụọ maka ihe ọkụkụ na-eme n'oge a dị na Shanghai na Shandong, China, na-ekpuchi mpaghara 70,000 square ma na-enwe usoro mmepụta ngwa ngwa akpaghị aka sitere na Europe.
Sunrise Chemical Industrial nwere njikwa nrụpụta zuru oke na usoro mmesi obi ike dị mma. Anyị enwetala asambodo sistemụ ISO 9001-2015. Dịka onye isi ahịa n’ahịa na ntinye isi PU, egosiputala na anyị nwere ike inye ndị ahịa ya ngwaahịa na ọrụ zuru oke.
Sunrise Chemical Industrial 'ika' SUNRISE 'na-enweta nkwalite ugwu na njiri mara aha ya na ụlọ ọrụ ahụ mgbe ọ fọrọ obere ka ọ bụrụ afọ iri abụọ mmepe. Ngwaahịa anyị ekpuchiwo mpaghara ngwa dị iche iche, dịka iwu, ịchọ ụlọ, ihe elektrọnik, arụmọrụ ụgbọ ala, ụgbọ njem ụgbọ ala, wdg. SunRISE PU foam na-aga n'ihu n'ahịa ụlọ ọrụ dị elu.
A na-ere ngwaahịa SUNRISE n'ụwa niile karịa mba 50, dị ka Germany, United States, Russia, Japan, South Korea, India na Dubai. A na-ejikwa ha n'ọtụtụ ọrụ dị ukwuu, dịka Beijing National Sports Center, World ባህል EXPO, Jinmao Tower, Tomson Riviera, Graces Villa, Star River, Pudong International Airport, International Financial Center na Beijing, Citibank na Russian Federal Building, enwetakwala echiche dị mma n’aka ndị ahịa.
Anyị na-ele anya ịmepụta ọdịnihu kachasị mma na ụlọ ọrụ kemịkalụ na gị, ezigbo ndị enyi.